I-Banana Bach ngasebhishi
Imikhawulo ye-covid ka-Te Whanau-a-Apanui iyasebenza kule ndawo futhi ingase ithinte ukuhlala kwakho kweholide.
Sicela usithinte ukuze uthole ukucaciselwa ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukha kwakho nathi.
Izindawo zokuhlala e- Bush To Bay Holiday.
Ngokuqondile ngaphesheya komgwaqo osuka e-Oruaiti Beach, indawo yokuhlala yolwandle enezindawo eziningi zokupaka izikebhe.
Laziwa yibo bonke abantu bendawo ngokuthi "Banana Bach" le kiwi bach eyisisekelo itholakala ngqo ngaphesheya komgwaqo osuka e-Oruaiti Beach e-Waihau Bay.
Lapho ufika e-bach uvele ucabange ukuthi indawo enhle kangakanani. Kuhle kakhulu. I-Oruaiti Beach iyibhishi elinesihlabathi esimhlophe okuwuhambo olufushane nje ukuwela umgwaqo. Alinamuntu futhi ngezinye izikhathi uzizwa sengathi unolwandle uwedwa, ngakho-ke ungakhohlwa ukupakisha incwadi enhle kanye nomata we-yoga.
I-bach ngokwayo ingeyokuqala futhi inazo zonke izitebhisi ezihlala phezulu. Lapho ukhuphuka ufika emnyango wendlu ufika endaweni ehlotshisiwe, lena indawo enhle yokuhlala ye-BBQ yantambama ngenkathi uhlanganisa ukubuka kolwandle okuhle kosuku lonke. Ukusuka emphemeni ufaka ipulani elivulekile indawo yokuhlala enkulu. Ikhishi ngele-1960's futhi linikeza zonke izidingo eziyisisekelo ozidingayo ngenkathi uvakashele eholidini. Kukhona i-TV egumbini lokuphumula/ lokudlela futhi uzothola ukwamukela ucingo ngeVodafone.
Amalungiselelo okulala awabantu abangafika kwabayisithupha emakamelweni okulala amathathu (2 x imibhede ephindwe kabili kanye nemibhede emi-2 x eyodwa). Indlu yokugezela ineshawa kanye nendlu yangasese ehlukile. Kukhona indawo yokuwasha ngaphandle enomshini wokuwasha nokomisa.
Abadobi bahlangane, lesi sigaba esikhulu singahlinzekela izikebhe eziningi ukuthi zipakwe ukuze zikhiye futhi zilayishe leso sikebhe kanye ne-trailer. Le ndawo inikeza ukudoba okuhle kakhulu ogwini, kodwa futhi ukudoba okuhle kwezilwane kungaba ngo-December kuya ku-August.
Ibhishi elingaphesheya komgwaqo ebhishi lokubhukuda eliphephile lemindeni. Yonke imisebenzi yakho evamile yasebhishi ingajatshulelwa kusukela lapha. Indawo ekude futhi eyigugu ngendlela emangalisayo, sikumema ukuthi uze uzophumula, uphumule, ubalekele esiphithiphithi sempilo yansuku zonke futhi ujabulele ugu oluhle lwaseMpumalanga yaseNew Zealand.
Qaphela: - I-bach okwamanje iyalungiswa ngakho izobukeka ngendlela ehlukile ezithombeni.
- Le bach ingeyangempela yenkathi yayo yama-1960, ifaneleka kahle kubadobi kanye nabantu abajabule ngendawo yokuhlala eyisisekelo. Indawo idinga ukuvuselelwa futhi ukubuyekezwa kukhombisa lokhu.
- I-Waihau Bay inenethiwekhi ye-Vodafone kuphela- ayikho ikhava yeselula ye-Spark.
- Izivakashi kudingeka ukuthi zinikeze imininingwane Yekhadi Lesikweletu kanye Nobunikazi Bezithombe lapho zingena.
4.27(15 okushiwo abanye)
4.27 · 15 okushiwo abanye
Ithule futhi ikude, i-Waihau Bay iyindawo enhle yokudoba, enye yezindawo zokudoba ezihamba phambili eNew Zealand. Kunesitolo/ikhefi eyodwa kuphela kanye nendawo yokudlela etholakala e-Waihau Bay Lodge. Esikhathini sokudoba emiqhudelwaneni , ungathola nokudla ukuze udle e-Waihau Bay Fishing Club. Jabulela ulwandle oluhle, indawo ekahle yemindeni.